Buy Dhama Thukha Condo for Rent and Sale (ID-665) in Hlaing on ipivi.com
Dhama Thukha Condo for Rent and Sale (ID-665)
Views: 39 (+1)
Dhama Thukha Condo for rent and sale in6miles, Mayangone Township. Near Inya Lake. The living area of condo is - 2000 sqft, organized by Living-room, Three Master Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo.
Rent Price - 2000 USD (Nego)
Sale Price - 2950 Lks (Nego)
ငှားရန်နှင့် ရောင်းရန်ရှိသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ခြောက်မိုင်တွင်တည်ရှိသည့် ဓမ္မသုခကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ အင်းယားကန်သို့ သွားရောက်နီးသည့် ကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအကျယ် - ၂၀၀၀ စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် သုံးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။
ငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
အရောင်း ဈေးနှုန်း - သိန်း ၂၉၅၀ (ညှိနှိုင်း)
ငှားရန်ရောင်းရန်ရှိသော ဓမ္မသုခကွန်ဒို (ID-665)
Name: Dhama Thukha Condo for Rent and Sale (ID-665)
Yangon Region , Hlaing